Philips HR1832 Juicer: သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် "Juicers & Fruit Extractors" ကို အွန်လိုင်းတွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ | Shop.com.mm
"Juicers & Fruit Extractors"
ကုန်ပစ္စည်းPhilips HR1832 Juicerအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်
နာမည်ကျော် Philips အမှတ်တံဆိပ်မှ ထုတ်လုပ်သည့် HR1832 မော်ဒယ်လ်အမျိုးအစား ဖျော်ရည်စက်တွင် 500W အားရှိသည့် မော်တာပါဝင်သောကြောင့် သင်ကြိတ်မွှေလိုသည်များကို အလွယ်တကူ ကြိတ်မွှေပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အလျင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့် ပျော့သော သစ်သီးဖြစ်စေ မာသော သစ်သီးဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ဖျော်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုလည်း ဖျော်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းမှာလည်း ဆန်းသစ်ပြီး ဝင်ဆံ့နိုင်သည့် ပမာဏမှာ ၁.၅လီတာ ဖြစ်ပါသည်။ စက်အစိတ်အပိုင်းများကို ကောင်းစွာ ဆေးကြောနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် သုံးစွဲသူများ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
QuickClean နည်းပညာနှင့်အတူ အလွယ်တကူသန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်သည်။ အဖတ်ခံသည့်ဇကာခွက်နှင့်အတူ ချောမွေ့သည့်မျက်နှာပြင်တို့ဖြင့် စီမံထားသဖြင့် ၁ မိနစ်အတွင်းသန့်ရှင်းမှု များကို အပြီးလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မော်တာမှာ ၄၀၀ ၀ပ်အားကိုအသုံးပြုသဖြင့် ကြိတ်မွှေခြင်း၊ခြေခြင်းများကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် စွမ်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်သည်။
တစ်ခါကြိတ်ရုံဖြင့် ဖျော်ရည် ၁.၅ လီတာခန့်ဖျော်နိုင်ခြင်း
ဆန်းသစ်သည့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည့် QuickClean နည်းပညာနှင့်အတူ ဖျော်ရည်ဖျော်ပြီးပါက ခရားတွင် တင်ကျန်ခဲ့သည့်အဖတ်များကို ရှင်းစရာမလိုလောက်အောင်ပင် ကြိတ်ပေးမှာဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ခါကြိ်တ်ရုံဖြင့် ၁.၅ လီတာခန့်ဖျော်ရည်ချည်းသက်သက်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်များPhilips HR1832 Juicer
အမှတ်ပေးချက် နှင့််ဝေဖန်အကြံပြုစာ Philips HR1832 Juicer
This Philips product is good and neat. I used it first time this morning, and my orange juice was smooth and sweet. The cleaning up is quite easy,too.
ဒီ Philips ဖျော်စက်လေးကို သဘောကျတယ်။ အသီးဖျော်ဖို့ထည့်တဲ့အခါ သက်သက်လှီးစရာမလိုဘူး။ အ၀ကျယ်လို့ အသီးကိုအလုံးလိုက်ထည့်လို့ရတယ်။ ဖျော်တာမြန်ပြီး တစ်ခါဖျော်ရည် ခွက်အများကြီးရတယ်။ ဆေးကြောလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။
မှ ကြူြ.
အသီးတွေကို လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖျော်သောက်လို့ရတဲ့အပြင် 1.5L အထိရတော့ ခဏခဏ ထပ်ဖျော် စရာမလိုတော့ဘူး။ သုံးပြီးရင်လဲ ဆေးကြောရတဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူပါတယ်။ အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ ပစ္စည်းလေး တစ်ခုပါ။ အိမ်ရှင်မတိုင်းဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။
မှ Thu T.
Philips Juicer လေးက ကြိတ်ရမွှေရအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဆေးကြောရလည်း အဆင်ပြေလို့ အရမ်းသဘောကျတယ်။